Ahoana ny fomba handefasana horonam-peo sy horonan-tsary avy amin'ny Linux mankany Chromecast | Avy amin'ny Linux
Chromecast io no lasa fitaovana ampiasaina indrindra handefasana amin'ny fahitalavitra izay naverina amin'ny laoniny amin'ny solo-saintsika, na amin'ny finday aza. Ireo mpampiasa Linux dia tsy manana fampiasa zanatany mamela antsika mandefasa feo sy horonan-tsary Linux mankany amin'ny Chromecast, noho izany dia tsy maintsy misafidy rindranasa toa isika mkchromecast, izay ahafahantsika mamindra mora foana ny atiny izay tiantsika ho jerena amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ity fitaovana ity.
1 Inona ilay Chromecast?
2 Inona no atao hoe mkchromecast?
3 Ahoana ny fametrahana sy fampiasana mkchromecast?
4 Alefaso amin'ny Youtube mankany amin'ny Chromecast
Inona ilay Chromecast?
Izy io dia fitaovana HDMI mitovy amin'ny kapila USB izay mifandray amin'ny fahitalavitra mba hahazoana ny famantarana avy amin'ireo fitaovana haino aman-jery izay mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi. Amin'ity fitaovana ity dia afaka jerentsika ny atiny multimedia nalefa tamin'ny solo-saintsika, ny telefaona finday ary koa ny mpitety tranonkala.
Inona no atao hoe mkchromecast?
Fitaovana loharano misokatra, voasoratra anaty Python ary inona no ampiasainao node.js, ffmpego avconv hahazoana ny raki-peo sy horonan-tsary avy amin'ny Linux ka hatramin'ny Chromecast.
mkchromecast mandefasa haino aman-jery ao amin'ny Chromecast anay nefa tsy very ny kalitaon'ny feo sy ny horonan-tsary, izy io koa dia mifanaraka amin'ny riaka marobe, vahaolana am-peo avo lenta 24-bit / 96kHz, mivantana mivantana avy any YouTube, miaraka amin'ireo fiasa hafa hita ao amin'ny maodelim-baovaon'i Chromecast maoderina.
Ny fitaovana dia manana tabilao fampiasana faran'izay tsara, izay aseho ao anaty boaty. Toy izany koa ny fametrahana ny mkchromecast mahitsy amin'ny ankamaroan'ny distro Linux io.
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana mkchromecast?
Amin'ny distro Linux rehetra dia afaka mametraka mkchromecast mivantana avy amin'ny kaody loharano nampiantranoiny tao amin'ny Github isika, noho izany dia tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Clone ny tahiry ofisialin'ny fitaovana, na, raha tsy izany, alao ny kinova azo antoka an'ny fampiharana avy eto.
Mandeha amin'ny fampirimana vao namboarina izahay ary manohy manatanteraka pip apetraka amin'ilay rakitra requirements.txt izay misy ny fiankinan-doha ilaina rehetra mba hiasa tsara ny fitaovana (amin'ny tranga sasany dia tsy maintsy ampitaina amin'ny sudo ilay fitaovana):
Ny mpampiasa Debia, Ubuntu ary ny derivative dia afaka mametraka ny fitaovana mivantana avy amin'ny tahiry ofisialy, mandehana fotsiny ity baiko manaraka ity avy amin'ny console:
Ho an'ny anjarany, ny mpampiasa Linux Linux sy ny derivatives dia afaka mampiasa ilay fonosana misy ao amin'ny tahiry AUR
Azontsika atao an-tsaina amin'ny antsipiriany ny fihetsika sy ny fampiasana an'ity fampiharana ity amin'ireto GIF manaraka zarain'ny ekipa fampandrosoana ireto. Azontsika atao koa ny mahita ireo fampianarana ofisialy fampiasana avy Eto.
Alefaso amin'ny Youtube mankany amin'ny Chromecast
Ny zavatra tiako indrindra momba ity fampiharana ity dia ny ahafahantsika mandefa mivantana horonantsary YouTube iray avy amin'ny console mankany amin'ny chromecast-ntsika, noho izany dia tsy maintsy manatanteraka ity baiko manaraka ity izahay:
Tsy misy isalasalana, fitaovana iray ahafahantsika mandefa ny haino aman-jery multimedia avy amin'ny Linux mankany Chromecast amin'ny fomba mora sy haingana ary tsy manary kalitao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana ny fomba handefasana horonam-peo sy horonan-tsary avy amin'ny Linux mankany Chromecast
Mampiasa betsaka an'ity fitaovana ity amin'ny chromecast aho, mamela fanatsarana marobe amin'ity iray ity. afaka mandefa rakitra video ianao
Muammar dia hoy izy:
Castnow dia fandefasana horonantsary horonantsary fotsiny, fa tsy fandefasana feo amin'ny fotoana tena izy.
Mamaly an'i Muammar
Mahafinaritra @Lagarto, misaotra.
Carlos Moreno dia hoy izy:
Multimedia dia tsy manam-paharoa amin'ny maro. Tsy tokony hiteny hoe "multimedia" mihitsy ianao.
Valiny tamin'i Carlos Moreno
Misaotra betsaka noho ny fanazavanao malala, nanitsy sy nampitombo ny teniko aho noho ny fandinihanao
Efa nitady zavatra nitovizany nandritra ny andro maro aho. Misaotra anao !!
Senhor Paquito dia hoy izy:
Mahaliana. Hiezaka izany aho, tsy misy fisalasalana.
Ny fanontaniana dia ny fomba handaminana ny Firewall. Ho an'i Chrome, ohatra, tsy vitako ny nanamboatra azy io ary ny atiny afa-tsy (avy amin'ny YouTube na inona na inona) no alefany ary tsy mandeha ny firewall.
Misy mahay mandamina azy ve?
Valiny tamin'i Senhor Paquito
Raha mampiasa Ubuntu ianao, eto dia azonao atao ny mamaky ny fomba https://github.com/muammar/mkchromecast/wiki/FAQ#i-am-using-ubuntu-firewall-how-can-i-use-mkchromecast-with-it.
Eny tokoa, mampiasa Ubuntu aho (azafady, saingy tsy tsapako ny nilaza izany) ary, manomboka izao, afaka mampiasa ny Chromecast ihany koa aho nefa tsy mila manala ny Firewall.
Mamaly indray aho, milaza aminao fa taorian'ny nanokafako ny seranan-tsambo 5000, dia namerina fotsiny aho sao nanokatra Chrome ary nahita ny Chromecast, izany no nahatonga ahy hieritreritra fa manan-kery eo amin'ny haavon'ny rafitra ny seranan-tsambo ary misy rindranasa afaka mandefa atiny ao amin'ny Chromecast indray mandeha misokatra.
Saingy tamin'ny fotoana nanandramako azy dia tsy mifandray intsony. Toa vao elaela vao nanomboka ny firewall, ary izany no antony niandohany.
Ka azoko tsara fa ny port 5000 ho an'ny mkchromecast ihany, sa tsy izany?
Eny, miala tsiny aho. Heveriko fa diso ny famakiako azy. Saingy amin'ny teôria dia tsy tokony hisy olana ny fananana firewall sy fampiasana chrome. Tsy mbola nanandrana aho satria mampiasa Debian. Ary eny, ny seranan-tsambo 5000 ihany no ilaina amin'ny mkchromecast.
Mikasika ny fametrahana mkchromecast avy amin'ny toeram-pivarotana ofisialy Ubuntu, dia tokony homarihina fa ny fonosana dia tsy ao amin'ny repositories Ubuntu 16.04. Raha ny fahitako azy dia toa tsy misy afa-tsy amin'ny Ubuntu 16.10 izy io.
ary any amin'ny distro gentoo ??
Tsy hitako ny vahaolana amin'ny tsy fisian'ny fiainana ao amin'ny Sabayon Linux-ko.
KodExplorer: Mamolavola tranokala avy amin'ny browser